မက်ဆီရှိရာ ပြင်သစ်သို့ လာကစားရန် ပေါ်တူဂီကစားဖော်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကို ရော်နယ်ဒို ဘယ်လိုတုံ့ပြန်လိုက်သလဲ? – Play Maker Sports Journal
မက်ဆီရှိရာ ပြင်သစ်သို့ လာကစားရန် ပေါ်တူဂီကစားဖော်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကို ရော်နယ်ဒို ဘယ်လိုတုံ့ပြန်လိုက်သလဲ?
Ballon d’Or ဆုကိုခြောက်ကြိမ်ရအာဂျင်တီးနားအသင်းခေါင်းဆောင်ဟာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားဘဝနှစ်ပေါင်းများစွာလာလီဂါကိုလွှမ်းမိုးလာပြီးနောက်လီဂူး၁မှာစိန်ခေါ်မှုသစ်ရင်ဆိုင်သွားပါမယ်။
ဖွန်တီက “လီယွန်နယ်မက်ဆီလိုကစားသမားတစ်ဦးကပြင်သစ်ဘောလုံးလောကကကျွန်တော်တို့လိဂ်မှာကစားလာမှာဆိုတော့အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားရတယ်။သေချာတာကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ယှဉ်ပြိုင်ရတာပိုပြီးတော့ခက်ခဲလာပါမယ်။ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့စိန်ခေါ်သစ်သွားပါမယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကိုလိုင်လီသို့လာကစားဖို့နေ့တိုင်းစာပို့နေပါတယ်။သူက “Ha Ha Ha”ဆိုပြီးတော့ဘဲတုံ့ပြန်တယ်”လို့ပြောကြားသွားပါတယ်။
မက္ဆီရွိရာ ျပင္သစ္သို႔ လာကစားရန္ ေပၚတူဂီကစားေဖာ္ရဲ႕ေတာင္းဆိုမႈကို ေရာ္နယ္ဒို ဘယ္လိုတုံ႔ျပန္လိုက္သလဲ?
Ballon d’Or ဆုကိုေျခာက္ႀကိမ္ရအာဂ်င္တီးနားအသင္းေခါင္းေဆာင္ဟာပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ကစားသမားဘဝႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာလာလီဂါကိုလႊမ္းမိုးလာၿပီးေနာက္လီဂူး၁မွာစိန္ေခၚမႈသစ္ရင္ဆိုင္သြားပါမယ္။
ဖြန္တီက “လီယြန္နယ္မက္ဆီလိုကစားသမားတစ္ဦးကျပင္သစ္ေဘာလုံးေလာကကကြၽန္ေတာ္တို႔လိဂ္မွာကစားလာမွာဆိုေတာ့အရမ္းစိတ္လႈပ္ရွားရတယ္။ေသခ်ာတာကေတာ့ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရတာပိုၿပီးေတာ့ခက္ခဲလာပါမယ္။ဒါေပမယ့္ကြၽန္ေတာ္တို႔စိန္ေခၚသစ္သြားပါမယ္။ၿပီးေတာ့ကြၽန္ေတာ္ဟာခရစၥတီယာႏိုေရာ္နယ္ဒိုကိုလိုင္လီသို႔လာကစားဖို႔ေန႔တိုင္းစာပို႔ေနပါတယ္။သူက “Ha Ha Ha”ဆိုၿပီးေတာ့ဘဲတုံ႔ျပန္တယ္”လို႔ေျပာၾကားသြားပါတယ္။
စာချုပ်သက်တမ်းတိုးရန် သဘောတူညီမှုရပြီး ၆ လကြာချိန်တွင်မှ လက်မှတ်ထိုးလာတော့မယ့် လိဒ်နည်းပြ